सावधान ! नक्कली क्रिप्टो एक्सचेन्जले भारतीयहरूसँग १६ अर्ब बढी ठगे, यसरी हुनसक्छ तपाईमाथि पनि ठगी « Bizkhabar Online
सावधान ! नक्कली क्रिप्टो एक्सचेन्जले भारतीयहरूसँग १६ अर्ब बढी ठगे, यसरी हुनसक्छ तपाईमाथि पनि ठगी
22 June, 2022 9:49 am
काठमाडौं । साइबर ठगहरुले नक्कली क्रिप्टो एक्सचेन्जहरू मार्फत भारतीय लगानीकर्ताहरूलाई लगभग एक हजार करोड भारतीय रुपैयाँ (नेपाली १६ अर्ब रुपैयाँ) भन्दा बढी ठगेका छन्। मंगलबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा यो खुलासा गरिएको हो । साइबर सेक्युरिटी कम्पनी ‘क्लाउड सेक’ले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
रिपोर्टका अनुसार क्रिप्टो घोटालाको संख्यामा वृद्धि भएको छ । यी अवस्थामा, वेबसाइट नक्कली डोमेनमार्फत ठ्याक्कै वास्तविक जस्तै सिर्जना गरेर क्रिप्टो व्यापारको लागि आमन्त्रित गरिन्छ । कम्पनीले धेरै फिसिङ डोमेन र एन्ड्रोइडमा आधारित नक्कली क्रिप्टो एप्लिकेसनहरू पर्दाफास गरेको छ। नक्कली क्रिप्टो एक्सचेन्जमा करिब ५० लाख भारतीय रुपैयाँ गुमाउने पीडितले कम्पनीलाई सम्पर्क गरेको थियो ।
त्यस्तै, मुम्बईको मालाबार हिलका एक लगानीकर्तालाई ठगहरूले १.५७ करोड रुपैयाँ ठगी गरेका छन् । यस्ता घोटाला भारतमा मात्रै सीमित छैनन् । गत हप्ता जुन १७ मा, यूएस फेडरल ब्यूरो अफ इन्भेस्टिगेशनले स्क्यामरहरूले धोखाधडी गर्न धेरै सोशल मिडिया प्लेटफर्महरू प्रयोग गरिरहेका खुलासा गरेो थियो । अमेरिकामा, त्यस्ता घोटालाहरूले धेरै लगानीकर्ताहरूलाई प्रति व्यक्ति १२.५ करोड रुपैयाँ (१.६ मिलियन डलर) नोक्सान पुर्याएको छ।
यसरी हुन्छ ठगी
साइबर ठगहरू विभिन्न सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा लगानीकर्ताहरूलाई ठूलो नाफा कमाउन र तिनीहरूलाई आफ्नो खाता वा च्यानलहरूमा लिङ्क गर्न प्रलोभन दिएर क्रिप्टो विशेषज्ञ बन्छन् । तिनीहरूले केही दिन वास्तविक क्रिप्टो एक्सचेन्जमा केही सुझावहरू पनि दिन्छन् । एकपटक लगानीकर्ताहरू विश्वस्त भएपछि ठगहरूले तिनीहरूलाई अर्को क्रिप्टो एक्सचेन्जमा सार्न आग्रह गर्छन् । यो नक्कली विनिमय हो । लगानीकर्तालाई लोभ्याउनको लागि उपहारको रूपमा १ सय डलर लगानीकर्ताको खातामा जम्मा गरिन्छ । जब लगानीकर्ताले क्रिप्टो मुद्रा स्थानान्तरण गर्दछ वा आफ्नो खातामा ठूलो पैसा जम्मा गर्दछ, ठगहरूले उसको खाता कब्जा गर्छन्।
ठगीबाट यसरी बच्नुहोस
जनाकारहरुले यस्तो ठगीबाट बच्न कुनै पनि योजना, कम्पनी वा एक्सचेन्जमा लगानी गर्नु अघि आफ्नै गहिरो अनुसन्धान गर्न सुझाव दिएका छन् । यस्तै वेबसाइटको विश्वसनीयता जाँच्न र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा कुनै पनि व्यक्ति वा समूहबाट आउने लगानी सल्लाहबाट बच्नुपर्ने सुझावमा छ । अनुवाद गरिएको